အဖြူလေး: ဖြစ်၍ မပျက်ခြင်းများ ( ၁ )
ဖြစ်၍ မပျက်ခြင်းများ ( ၁ )
ယခုနှစ် နွေရာသီက မနှစ်ကထက် ပိုပြီးပူလွန်းသည်ဟု ထင်ပါသည်။
ပူတာမှ ကျွတ်ကျွတ်နေအောင်ကို ပူပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လေတို့ ပါ ညိမ်နေတော့တမြိုက်မြိုက်နှင့် ချွေးသီး
တို့ တောင် ကျလာရပါသည်။ ကျွန်းမကြီးပေါ် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာမည့်ဟန်ပြင်နေသော တိုင်ဖုန်းတို့ သည်
လည်း ဟန်ရေးပြ၍သာ ဝေ့ ဝဲ လွင့်ပျယ်သွားမြဲ ဖြစ်နေတော့ သည်။ တိုင်ဖုန်းဝေးတော့မိုးပါ ပြေးလေသည်။
သည်နေ့ တော့ အခန်းထဲရှိမအေးနိုင်သော အဲယားကွန်း၏ ရှေ့ ဇကာကို ဖြုတ်ပြီး ကြည့် မိသည်။ မဲညစ်ညစ်ဖုံတို့ 
ဖြင့် အထွေးလိုက်၊ အထပ်လိုက် ကပ်နေသောဇကာကို ကြည့်မိပြီး ကျွန်တော့် အဆုပ် သည်လည်း နှစ်ပေါင်းများ
စွာအငွေ့ တွေ ၊ ဖုံတွေ အထပ်ထပ်နှင့်ညစ်ပတ်နေတော့ မည်ဟု တွေးမိသည်။ ဒါတောင် ဆေးလိပ်နှင့် အရက်
မသောက်မိသည်မှာ ခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိခဲ့ ပြီ။ ဆက်တိုက်သာ သောက်သုံးခဲ့ ပါက ယ္ခုလောက်ဆို ကျွန်တော့်
အဆုပ်သည်လည်း ကျွန်တော်နှင့်အတူ မြေကြီးထဲ ရောက်၍ မြေစာမြေခဲ ဖြစ်လောက်ပြီဟု တွေးမိပါသည်။
လူတစ်ယောက်ကို မြေမြုပ်ပါက ငါးနှစ်ကျော် ခြောက်နှစ်အတွင်း မြေမှုန့် ဘဝ ရောက်သည်ဟု ကြားဖူးသည်။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် တစ်နေ့ မြေကြီးဖြစ်မည့်မြေကြီးမျိုးတွေဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အော်..
သည်လိုဆိုတော့ လည်း ကိုယ်ရှင်စဉ် ရှိစဉ်က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေးခေါ်ခဲ့ သော လောကကို အကျိုးပြုဖို့ ၊
ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်မရှိတော့ ရင်ပဲ မဖြစ်တော့ သလို “ ... ရ အုံးမယ် ” ဆိုသော ကိစ္စ၊ ဝိစ္စ တွေနှင့် 
ဘယ်တော့ မှ မအားခဲ့ သော ကိုယ်က၊ တကယ် ကိုယ်မရှိတော့ လည်း လောကကြီးက ဒီအတိုင်းပဲ မထူးခြားစွာ
ဆက်လက်လည် ပတ်နေအုံးမှာပါပဲ.. ဟု စဉ်းစားမိရင်း အဲယားကွန်းဇကာကို ရေပန်းအောက်သို့ ထိုးထည့် ပြီး
ဇကာကို ဆေးပြီးတော့နေပူလှန်းရသည်။ အပူချိန်က ၃၂ ဆိုတော့မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ဆို ခြောက်လောက်
ပြီ၊ သည်ည တော့အဲယားကွန်းလေး အေးတော့ မည်ဟု တွေးရင်း မမရွှေစင်၏ နိဗ္ဗာန်သွားတောလား( ၃ ) မှ
ကိုစိန်ရိုး၏ ကွန့် မန့်ကို ဝင်ဖတ်ဖို့စက်ရှေ့ ထိုင်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ ည က“ လာဖတ်အုံး ” ဟု မမရွှေစင်က လှမ်း
ပြော၍ သူ့ကွန်မန့် ကို ခဏ ပြေးဖတ်မိရင်း ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်မြင်ထင်နေမိတာလေး ပြန်ရေးချင်လာသည့် 
အတွက် စာကြမ်းအဖြစ် သတိကြီးစွာ စ, ရေးမိခဲ့ ပါသည်။
အစ ကတော့မှားမှာစိုး၍ .. မှ စ, ပါသည်။ မမရွှေစင်က သူရိပ်သာဝင်စဉ်က အကြောင်းအရာလေးတွေကို
ဓါတ်ပုံလေးတွေ ဝေဝေဆာဆာဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားတောလား ၁, ၂, ၃, ဆိုပြီး ဆက်တိုက်ရေးသားလာခဲ့ တုံးက
ကျွန်တော်လည်း အစဉ်အတိုင်း ဝင်ဖတ်လာရင်း နောက်ဆုံး ( ၃ ) မှာ ကိုစိန်ရိုး၏ ကွန်မန့် နှင့်ဆုံဆည်းမိပါ
ကျွန်တော်က မမရွှေစင် ရိပ်သာမဝင်မီကတဲက မထိုင်ခင် သေသေချာချာ သိအောင် အရင်လေ့ လာပါအုံးဟု
မှာလိုက်ပါသည်။ သူက သူ့ ဘဝတွင် ပထမဆုံးဝင်ဘူးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ ကြောင့်ကျွန်တော်က
လည်း ကြည်ကြည်နူးနူးနှင့်ပဲ အားပေးမိပါသည်။ ရိပ်သာတစ်ခါဝင်ဖို့ ဆိုသည်မှာ တရားတစ်ပွဲ သွားဖို့ ပြင်ရသလို
အတော်မလွယ်သည့် ကိစ္စကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေသည်။ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးသည့်ခရီးအဆင့် ဆင့် ကို ရုတ်တရက်
ထ,၍ သွားနိုင်ကြပေမယ့်တရားတစ်ပွဲ၊ ရိပ်သာတစ်ခါ ဝင်ဖို့ ကြတော့ပြင်ရ၊ ဆင်ရ၊ အချိန်ယူရ နှင့်ကုန်းထ
ရုန်းထနေရသည်မှာ အတော့် ကို မလွယ်လွန်းသည့် ကိစ္စကြီးဖြစ်နေလို့ ပါပဲ ။
ကိုယ့် ရေးဘက် စီနီယာလည်းဖြစ် လူတကာတို့လုပ်နိုင်ခဲသည့် အလုပ်ကို လုပ်မည့်သူလည်း ဖြစ်နေတော့သူ
မသွားမီ ညအထိ ကျွန်တော်လည်း ရှည်ရှည်ဝေးဝေး လျှာရှည်နေမိသည်။ ဘာဖြစ်လို့ ဆို ကျွန်တော်လည်း
တစ်ချိန်က သူ့ လိုပဲ ကုန်းထ, ရုန်းထ ပြီး ရိပ်သာတို့ သို့ပြေးခဲ့ ဘူး၍ ဖြစ်ပါသည်။ ရိပ်သာတို့ ဟု ဆိုလိုက်ရသည်
မှာ သုံးနေရာ၊ သုံးဌာန သို့စဉ်တိုက်၊ ဆက်တိုက် လိုက်ခဲ့ ၊ ရောက်ခဲ့ ဖူးသောကြောင့် ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဆုံးဝင်ခဲ့ သည့် ရိပ်သာက ဥိးဂိုအင်ကာ ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ ဝင်ခဲ့ သည်က ရွှေဥမင်တောရ ဖြစ်သည်။
တပ်တိယ ဝင်ခဲ့ သည်က ပိုင်းလော့ ဆရာတော် အရှင်ဇေယျာပဏ္ဏိတ၏ မိုးညှင်းသိင်္ဂီကျောင်းတိုက်ဖြစ်သည်။
ဆရာတော့်ကျောင်းက တောင်မြောက်လမ်းစုံနားတွင်ရှိပါသည်။ ဆရာတော်ကတော့ထိုင်ဖို့ ကို အရင်
တိုက်တွန်းတော်မမူပဲ သိအောင်၊ နားလည်အောင် ငါးရက်လုံးလုံး ပရိုဂျက်တာကြီးထိုးပြပြီး အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြ
ခဲ့ ပါသည်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းကြီးအကြောင်းနှင့်ခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းတို့ ကို သိအောင် သင်ပေးခဲ့ ပါသည်။
ကိုယ့် ဘာသာအကြောင်း စ,တင် စိတ်ဝင်စားလာသူများနှင့် ၊ ကိုယ့် အတွက် ကိုယ်တကယ်ပင် ပြင်ဆင်တော့ 
မည့်သူများအတွက် အလွယ်တကူ သိနိုင်ခဲလှသော ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ရပ်လုံး၏ အခြေခံ အကြောင်းအရာများ
ဖြစ်ပါသည်။ မကြာခဏ ကြားဖူးနေသော ခန္ဓာငါးပါးဆိုသည်မှာလည်း အမေက မွေးထုပ်ပေးထားသော အချိန်
နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်ခန့် ရှိ ခန္ဓာအိမ်ကြီးကို မဆိုလိုပဲ မျက်စေ့ တစ်မှိတ်၊ လျှပ်တစ်ပြက် အတွင်းမှာပင် ဖြစ်ပျက်
ပြောင်းလဲနေသော စိတ်၊ စေတသိတ်၊ နမ်၊ ရုပ်တို့ ၏ သဘောတို့ ကိုသာ ဆိုလိုကြောင်း မှတ်သားမိခဲ့ ရပါ၏။
မမရွှေစင်က သူ့ ဘဝမှာ ကြုံရင် ကြုံသလို တရား နာဖူးပါသည်ဟု ပြောသည်။ ဒီနေရာတွင်တော့ကျွန်တော်
နှင့်တူပါသည်။ ကြုံမှ နာ ဖူးသည်ဆိုတော့ လည်း တစ်ခါကြုံဖို့ အတွက် တရားပွဲကကြုံပေမယ့်ကိုယ်က မကြုံနိုင်
သည်က ခပ်များများ ဆိုတော့ ဘဝမှာ တရားနာဖြစ်ခဲ့ သည့်အချိန်လေးက နှစ်နာရီခန့် ရှိသည့် ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို
တစ်ခွေ၏ နောက်ဆုံးပိတ် “ ပြီးပါပြီ ” စာတန်း ထိုးသလောက်တော့ရှိနိုင်မည်ဟု မရဲတရဲပဲ ပြောချင်ပါသည်။
ထိုသို့ နာခဲ့ ဖူးသော အချိန်လေးတွေကို ပြန်လည်ချင့် ချိန်မိပြန်တော့တစ်ခါဘူးမှ စိတ်ရှင်းရှင်း ၊စိတ်ဖြောင့် 
ဖြောင့် စိတ်အေးအေးဖြင့်နာခဲ့ ဘူးသေးတာ မရှိသလောက်ဖြစ်နေခဲ့ ပါသည်။ နားက ထောင်မိနေသလောက်
စိတ်က ရောက်ချင်ရာ ရောက်နေခဲ့ ပါသည်။ သည်တော့တရားပွဲ ပြီးတော့ လည်း သိသလိုလို၊ လိုလို နှင့် ပဲ
ဒုံရင်း ပြန်ရောက်၍ မူလထုံးစံအတိုင်း စိတ်ရောင်စုံ၊ အတွေးရောင်စုံ၊ ဇောရောင်စုံ တို့ ဖြင့် ပဲ ပြန်လည်လုံးပန်းမိ
ရင်း ဘဝရဲ့  အချိန်တွေကို အဖန်ဖန်ကုန်ဆုံးနေစေခဲ့ ပြန်ပါသည်။
တရားထိုင်ရပြီ ဆိုသည်နှင့်အရင်ဆုံး ထူထောင်ရသည့်ကမ္မဥာန်းမှာ ထွက်လေ၊ ဝင်လေ တို့ ကို သတိကပ်ပြီး
စောင့် ကြည့် ရှု့ မှတ်နေရသည့်အာနာပါန ကမ္မဌာန်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်သံသယာလုံး ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ
စက္ကန့် လေးတောင် မငြိမ်ခဲ့ သော စိတ်ကလေးကို ချဉ်တိုင်ဖြစ်သော နှာသီးဝ၊ နှာသီးဖျားကလေးတွင် စ, တင်
ချဉ်နှောင်ရန် ကြိုးစားရသည့် အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံး လုပ်ကာစက အတော့် ကို မလွယ်ပေမယ့်ရိပ်သာ
ဝင်လာကတည်းက သိချင် စမ်းချင်စိတ် ပြင်းပြင်းပြပြဖြင့် တက်ကြွနေသော စိတ်ဆန္ဒတို့ဦးဆောင်နေ၍ မကြာ
သော အချိန်တွင်းမှာပင် ယောက်ယက်ခတ်နေသော စိတ်အာရုံတို့ က ကျွန်တော့် နှာသီးဝ၊ နှာသီးဖျားလေးမှာ
ပင် ချဉ်နှောင်မိလေတော့ သည်။ နားတို့ က ဝန်းကျင်မှ အသံမျိုးစုံတို့ ကို ကြားယောင်နေသေးသော်လည်း
မှိတ်ထားမိသော မျက်လုံးအိမ်ထဲမှာပင် ကျွန်တော့် နှာသီးဖျားရှိ ချွေးပေါက်ကလေးတွေမှာ ချွေးသီးလေးတွေ
သီးနေတာကိုတောင် မြင်ယောင်နေသလို ဖြစ်လာခဲ့ ပါသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အာရုံတို့ငြိမ်စ ပြုလာပြီး နှာသီး
ဝ၊ နှာသီးဖျားတို့ ကို တွန်းတိုက်၍ ဝင်ထွက်နေသော ဝင်လေထွက်လေတို့ က ကျွန်တော့်နားထင်နှစ်ဖက်မှာပါ
လာရောက် ရိုက်ခတ်မည်ဟီးနေသလို ဖြစ်လာခဲ့ ပြီး ငြိမ်သက်သွားသော တစ်ကိုယ်လုံးတွင် အကျယ်ဆုံး ကြား
နေရသည့်အသံတို့ ဖြစ်လာသည်။မကြာခင် လောင်မြိုက်ပေါက်ကွဲတော့ မည့် ဝေဒနာ “ အဖြစ် ” တို့မပေါ်လာ
မီ အရင်ဆုံး အေးချမ်းသွားသည့်အဖြစ်ကလေး ဟုလည်း ဆိုချင်ပါသည်။ ဆက်လက် ပြောပြပါအုံးမည်။
အထက်က ပြောခဲ့ သလို ရိပ်သာ သုံးခါ ပြောင်းခဲ့ ရခြင်းမှာ မကျေနပ်၍ ဖြစ်ပါသည်။
ဘာဖြစ်လို့မကျေနပ်ရပါသနည်းဆိုသော် ကိုယ်တိုင်ကိုက ဥာဏ်အားအလွန်နဲသောကြောင့် ဝိပဿနာအလုပ်
စခန်း၏ ပင်မ မဏ္ဏိုင်ဖြစ်နေသော ဖြစ်ပြီးတိုင်း ဖြစ်သမျှတိုင်း ပျက်ရသည်၊ ပျက်သည်ဆိုသည့်“ ဖြစ်၊ပျက် ”ကို
နားမလည် နိုင်လွန်းသောကြောင့် ပါပဲ ။ ကျွန်တော်က သာမာန် လူပြိန်းတစ်ယောက်လဲဖြစ်နေသည်ကိုး။
မျက်စေ့ တို့ စုံမှိတ်၊ ခါးကို ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လေးထားပြီး အသက်ရှုနေတာလေးကို သတိကပ်ပေးနေရင်းက မကြာသောအချိန်အတွင်းမှာပဲ ကျွန်တော့် ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံး နေရာအနှံ့  ရွရွမွမွလေးတွေ ဖြစ်လာပြီး
ကျွန်တော့် ခါးရိုးတစ်လျှောက် တဖြည်းဖြည်းနှင့်နာကျင်ကိုက်ခဲသည့် ဝေဒနာတို့ ထိုးတက်လာပါတော့ သည်။
ဝေဒနာတက်သည်ဟုလည်း သုံးနှုန်းကြပါ၏။ ထိုမှတစ်ဆင့်တင်ပြင်ခွေထားမိသော ခြေသလုံးအစုံကိုပါ
ကူးစက်လာတော့ သည်။ ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးဝါးပါသနည်းဆိုသော် ကျွန်တော့် အရိုးတွေ အကုန်လုံး
မီးလောင်နေသော ထင်းချောင်းကြီးတွေလို ဖြစ်နေတော့ သည်။ အငွေ့ တွေ ထွက်လုမတတ် လောင်မြိုက်
လာသည့်ဝေဒနာဖြစ်ပါသည်။ ထိုထို အချိန်နှင့်အမျှ ဖြစ်လာသော ဝေဒနာ အဖြစ်များကို ပျက်ပါသည်၊ ပျက်နေ
ပါသည်ဟု “ အပျက် ” ရှု့  ရသည့် အချိန်အခါပဲ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခြားသူတွေတော့ကျွန်တော်မသိ၊ ကျွန်တော့် 
အဖို့ တော့ မပျက်သည့် အပြင် တိုး တိုး လာခဲ့ ရသည်။ ကြာလာတော့နာလာသည့် ခါးက မီးလောင်နေသည့် 
ထင်းချောင်းကြီးလို မီးခိုးတို့ ထွက်မတတ် ပူပြင်း လာရပါတော့ သည်။ မပျက်ပဲ တိုးလာသည့် အဖြစ်များကြောင့် 
ဇောချွေးတို့ တောင် ပြန်လာခဲ့ ရပါသည်။ စ, ထိုင်စဉ်က အာနာပါန အလုပ်ကလေးဖြင့်ထူထောင်ထားခဲ့ သော
သမာဓိအား ( သမထ ) အားလေးတောင် ပျက်ချင်၊ လွင့်ချင်လာခဲ့ သည်။ မခံစားနိုင်လွန်း၍ စိတ်တို့လျှော့ လိုက်
ပြီး ချက်ခြင်း ထ, ပစ်လိုက်ချင်စိတ်၊ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ချင်စိတ်တို့ ပေါက်လာခဲ့ သည်။ ရှေ့ မှ ကမ္မဌာန်းဆရာ၏ ဖြစ်
လာသမျှ၊ တက်လာသမျှ ဝေဒနာတွေကို အပျက်ပဲ၊ ပျက်သွားပြီပဲ ဟု ရှု့ နေပါ၊ သိ ပေး နေပါ .. ဟူသော သတိပေး
သံကိုတောင် မကြားတစ်ချက်၊ ကြားတစ်ချက် ဖြစ်နေရရင်း၊ ငါယောင်္ကျားပဲ .. သူများရရင် ငါလည်း ရ, ရမယ်ဟု
ဇောစိတ်တို့ ဖြင့်ပိုင်းဖြတ်ရင်း အချိန်စေ့ အောင် ဆက်လက် ပေထိုင်ပစ်လိုက်ပါသည်။ အသက်ရှုသံတို့ လည်း
ပြင်းသည်ထက် ပြင်းထန်လာပါသည်။ ရင်ခုန်သံတို့မြန်ခဲ့ ပါသည်။ အေးချမ်းမှုကို တိုက်ပွဲတစ်ပွဲလို ဆင်နွှဲ၍ ရှာခဲ့ 
ကမ္မဌာန်းဆရာ ဖြစ်သူ၏ “ ကဲ .. ယောဂီတို့ ..၊ အချိန်စေ့ ပြီ၊ ဖြုတ်လို နားလိုက နားနိုင်ဖြုတ်နိုင်ကြပါပြီ ” ဟူသော
အသံ ကြားမှ သတိတို့ ပြန်လည်ခဲ့ ပါသည်။ အသိစိတ်တို့ခဏ ကွာသွားသလိုမျိုးပါပဲ။ ပြီးပြီ ဆိုတော့ ဝမ်းသာ
အားရဖြင့် ထ, ဘို့ လုပ်သည်။ ရုတ်တရက် ထ, မရပါ။ တင်ပြင်ခွေ အနေအထားနှင့်ပဲ လှုပ်မရတော့ ခြင်း ဖြစ်၏။
အထူးသတိထားပြီး စိတ်အာရုံတို့ ကို ခြေသလုံးကြောတို့ ထံ သတိဖြင့် ပို့ လွှတ်ရင်း ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ စ,လှုပ်
ကြည့် ရပါသည်။ အေးစိမ့် သွားသလို ဖြစ်ရသည်။ ထုံနာ၊ ကျင်နာ ဖြစ်ပြီး ပျောက်သွားသလိုမျိုး ဖြစ်သည်။
အမှန်က ကျွန်တော့်ခန္ဓာအိမ်ကြီး၊ အမေမွေးပေးထားသည့် အချိန်နှစ်ဆယ်ခန့် စီးသည့် ကိုယ်ကောင်ကြီးပေါ်
တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည့်ဝေဒနာစုံတို့ က တကယ်ပင် ရှု့ မှတ်နေရင်း ပျောက်ကင်း သက်သာ သွားသည်မဟုတ်ပဲ
အချိန်ကြာမြင့် စွာဖြင့်အာရုံကြောတို့ ကို အတင်းဇွတ်ဖိထိုင်ထားခဲ့ ခြင်းကြောင့်ထုံကျင်ပြီး ခဏ ပျောက်သွား
သလို ဖြစ်ခဲ့ ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်က ဘယ်ဝေဒနာမှ မပျောက်ခဲ့ ပါ။ ဝေဒနာမှန်သမျှ ရှိမြဲ ရှိနေသည်သာ
ဖြစ်သည်။ ထိုဝေဒနာတို့ က အကြိမ်ကြိမ် ထိုင်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့် မှာ အကြိမ်ကြိမ် တက် နေခဲ့ ရသည်။ ဤသို့ 
လုပ်ပါ ဖြစ်ပါများလျှင် လေဖြတ်တတ်သည်ဟုလည်း သိလာရပါသည်။
ရိပ်သာတို့ မှ အချိန်စေ့ ၍ ထွက်လာခဲ့ တိုင်း ကျွန်တော့် မှာ ပိန်ချုံးကျ သွားခဲ့ သည်။
ကျွန်တော့် ကို ကျွန်တော်လည်း အလွန်ဥာဏ်နည်းနေသည်ဟု သုံးသပ်မိသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်
ဝိပဿနာအလုပ်သည် ဥာဏ်အလုပ်၊ ဥာဏ်စခန်း၊ ပညာအလုပ်၊ ပညာစခန်း သာဖြစ်သည်ဟု ဆိုသောကြောင့် 
ဖြစ်သည်။ ဝိပဿနာအလုပ်သည် ချမ်းသာသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။ အားထုပ်ရင်း ဆင်းရဲနေရပြီ ဆိုလျှင်
တစ်ခုခုမှားနေသောကြောင့် ၊ ကိုယ်က အာစရိယ၏ မူကို သဘောမပေါက်သောကြောင့် ၊ လိုက်မမှီသေးသော
ကြောင့် ဟု ဆိုထားသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးမပျက် ဖြစ်ခဲ့ ရသည့်ကျွန်တော့်အဖို့ဖြစ်သမျှ ပျက်ရသည်ဆိုသည်ကို
အကြိမ်ကြိမ်လေ့ လာသင်ယူရအုံးမည်ဟုလည်း တွေးတော ဆင်ခြင်မိခဲ့ သည်။
ထို့ ကြောင့်ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ရေးဖက်စီနီယာဖြစ်သော မမရွှေစင်တစ်ယောက် ရိပ်သာဝင်တော့ မည် ဆို
သောအခါဝယ် ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်အဖြစ်ကိုသတိရပြီး မှားမှာစိုး၍ အလောတကြီး လှမ်းမှာခဲ့ ခြင်းဖြစ်၏။
သဘောမပေါက်ခဲ့ တော့ လည်း ဖြစ်သမျှကိုပျက်ပါသည်ဟု မကျေမနပ်နှင့် ပင် ကျွန်တော်လက်ခံခဲ့ ရရင်း
ရိပ်သာတို့ တောင် သုံးကြိမ်၊ သုံးခါ ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ ရဖူးပါသည်။
ယခုအချိန်ထိလည်း ဖြစ်သမျှတို့ပျက်သည်ဆိုတာကို ကျေနပ်စွာ လက်ခံနိုင်ရန် ဆက်လက် လေ့ လာနေရဆဲ
ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့်ပညာစခန်း၊ ဥာဏ်စခန်းဖြစ်သော ဝိပဿနာအလုပ်သည် အလွန့် ကို ခက်ခဲနက်နဲလှ
သောကြောင့်ကျွန်တော်လို ဥာဏ်မမှီသော၊ အထ နှေးသော သူ များ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းလို့မမှီနိုင်
သည် ဖြစ်ပြီး မပျက်ခြင်းများပထမဆုံးပို့ (စ) ကို အဆုံးသတ်မိချိန်တွင် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကြီးပေါ် ပထမဆုံး ထိုင်ဖုန်း
ဝင်သည့် အချိန်လည်းဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ မိုးတို့ ပါ ပါလာခဲ့ သော်လည်း သုံးလလောက် ဆက်တိုက်ပူနေခဲ့ သဖြင့် 
အပူရှိန်တို့ က ကြွနေဆဲ ဖြစ်သောကြောင့် လည်း အဲယားကွန်းလေးတော့ဆက်သုံးရအုံးမည်ဟု တွေးမိရင်း
ဆေးထားသော ဇကာလေးကို ပြန်တပ်လိုက်သည်။ စဉ်းစားမိသည်က ကိုယ်လေ့ လာမိသလောက်တော့ 
အချေအနေပေးရင် ပေးသလောက် အချိန်ယူရင်း ဆက်ရေးကြည့် အုံးမည် ၊့ ဖြစ်ပြီး ပျက်သွားနေပါသည်
ဆိုသည့်အကြောင်းများပါပဲ ...။
( အမှားတို့ လည်း ပါလာနိုင်သလို၊ အမှန်တို့ လည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်ရှာခဲ့ မိသော ဖြစ်ပျက်၏
ကိုယ်တွေ့  တစ်ခုကိုပဲ ပြန်လည်ဖောက်သည်ချပြီး ဆွေးနွေးသည့် သဘော ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာလုပ်ခြင်း၊
တတ်ရောင်ကားလုပ်ခြင်း တို့မဟုတ်ကြောင်း သိစေလိုပါသည်။ အမှန်ကို တိုက်ရိုက်တွေ့ ခဲ့ သူများ ရှိနေသလို
ကျွန်တော့် လို ဥာဏ်နဲလွန်းသောကြောင့်တစ်ဝဲလည်လည် ဖြစ်နေရသူများလည်း ရှိနေနိုင်သည်ဟု ထင်မိ
သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း သည်လို ပို့ (စ) မျိုးကို မရဲတရဲဖြင့်စ, ရေးခဲ့ မိခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ....။ )
Posted by ahphyulay at 5:03 PM
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လည်း မနေ့ တနေ့ကမှ စပြီး အာနာပါန ထွက်လေဝင်လေမှတ်ဖြစ်တယ်။ အတွေးတွေ အာရုံတွေ ဘယ်လိုမှ မငြိမ်နိုင်ဘူး ။ ခု ကိုကျော်ပြောသလို နာတာကျင်တာတွေလည်း ရှိတယ် ။ ဖြစ် ပျက် မှတ်ပေမဲ့ ပိုပြီးတော့သာ နာလာတယ် ဆိုတော့ ဘယ်နေရာ မှားနေပြီလည်း မသိ ။ခါးက ပိုနာလာတော့ အမှီလေးနဲ့များ ထိုင်ရင်ရမလားလို့ မစစကို မေးဖြစ်သေးတယ်လေ။ မရပါဘူးတဲ့။ ခါးမတ်မတ်ထား အမှီမပါရဆိုတော့ ခါးနာတတ်သူတွေ အတွက် အတော်ခက်တာပဲ ။ မဖြစ်ခင်ထဲက ပျက်နေပြီ လို့တောင် ဆိုရတော့ မလို ။ ဖြေရှင်းလို့ရမဲ့ နည်းလမ်းလေးများ သိရင် ပြောပြပါအုံး ကိုကျော် ရေ..
တစ်ခြားသူတွေတော့ကျွန်တော်မသိ၊ ကျွန်တော့် 
ဇောချွေးတို့ တောင် ပြန်လာခဲ့ ရပါသည်။ သိပ်မှန်တာပဲ...အဲတာကြောင့် ရိပ်သာစခန်းကနေ ရပ်မပြည့်ပဲ ပြန်ပြန်ပြေးတာ ကျွန်မပေါ့ အကိုရေ..အရမ်းခံရခက်တယ်..အကိုပြောသလို ပိန်တောင် ပိန်သွားတယ်ဗျို့..။
ရိပ်သာဘယ်နှစ်ကြိမ်ဝင်ဖူးလဲ မေးရင် လူအထင်ကြီးမှာသေခြာတယ်..။ ဒါပေမယ့်တောာ့ ဝင်လေ ထွက်လေ မဟုတ်ဘူး။
မနေ့က တရားသွားနာပြီး တရားတွေရေးလို့..။
အာနာပါနကို ခပ်ငယ်ငယ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်...သုံးလေးတန်းအရွယ်တကည်းက တစ်နေ့ကို နာရီဝက်လောက်တော့ ထိုင်ဖြစ်တာ ဆယ်တန်းကျောင်းသား အရွယ်အထိပါပဲ...အရွယ်ရလာတော့ ကြီးမိုက်ဖြစ်လာလို့ထင်ပါရဲ့ ရံဖန်ရံခါပဲ ထိုင်ဖြစ်တော့တယ်...တကယ်တော့ အာနာပါနဟာ နိဗ္ဗာန်ရောက်စေမယ့် အရာတစ်ခုတော့ မဟုတ်သေးဘဲ...သမာဓိရအောင် တစ်နည်းပြောရရင် စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင် လေ့ကျင့်တဲ့ ကျင့်စဉ်တစ်ခုပါ...အဲဒီအဆင့်ကနေမှ ၀ိပဿနာကို ကူးရမှာပါ...လက်ငင်းရနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးကတော့ စိတ်အာရုံပျံ့လွင့်မှု မရှိအောင် ထိန်းသိမ်းရတဲ့ အတွက် အတွေးထဲမှာ လောဘတွေ ဒေါသတွေ မ၀င်ရောက်နိုင်တော့တာမို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အေးချမ်းမှု၊ တည်ငြိမ်မှုတွေ ရနိုင်တာပါပဲ...ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ဆွေးနွေးရရင် ကျမ်းတစ်စောင်ပေတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ပါရစေတော့...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်လေ့ကျင့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ...သာဓုလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခေါ်လိုက်ပါတယ်...
အားလုံးအတွက် ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်မယ် လို့ ပြောတယ် အဖြူလေး အတွက် ဖြစ်ပြီးမပျက်တော့ ပိုကောင်းမနေဘူးလား.... စ တာနော်
မမတရားထိုင်တုန်းကတော့ ကိုယ်သည်းခံ နိုင်သလောက်ဘဲ ထိုင်တယ် သည်းမခံနိုင်ရင် ပြင်ထိုင်တယ် မထိုင်နိုင်တော့ရင် အမှတ်နဲ့ စင်္ကြန်လျှောက် ရမယ်လို့ ဘုန်းဘုန်းကပြောတယ်
အဖြူလေး က အကျင့်မရှိဘဲ ဆက်တိုက် တအား ထိုင်ပြစ်လိုက်တော့ တရားကြောက်သွားတာများလား ဆက်တိုက် ဖြေးဖြေးချင်း တရားထိုင်ချိန် တိုးသွား မှ ပို အဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်တယ်
နောက်ပြီး မမ တို့ တရားထိုင်တုန်းကတော့ ဖြစ် ပျက် ကို မမှတ်ခိုင်းသေးဘူး ထင်ရှားတဲ့ အရာကိုဘဲ ဆက်တိုက် မှတ်ခိုင်းတယ် ယားတယ်ဆိုရင် ဟိုနေရာက ယား ဒီနေရာက ယားဆိုတော့ အယားဆုံး နေရာလေးကိုကြည့်
အဲဒီယားတာ လေး ကလည်း ခဏနေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း တောင် မသိဘူး တခြားနေရာ တခု က နာလာပြန်ရော အဲဒီ နာတာလေး လိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ် နောက်ဆုံး လုံးဝ သည်း မခံနိုင်ရင် စင်္ကြန်ပြောင်းလျှောက်တယ်
မမတော့ တရားထူးမရခဲ့ပေမဲ့ စိတ်ရော ကိုယ်ရော ငြိမ်းချမ်း ခဲ့ပါတယ်
နောက်ပြီး အပေါ်မှာ မကိပြောသလို ခါးနာနေတဲ့ အမတယောက် မမတို့ နဲ့ အတူထိုင်တဲ့ အထဲမှာ ပါတယ် သူက စထိုင်တုန်းက ခါးနာ နာ နေလို့ လာထိုင်တာတဲ့ လုံးဝပျောက်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်
အဲဒါကြောင့် အခု နှစ်စဉ် တနှစ်ကို သုံးခါလောက် တကြိမ် ကို အနဲဆုံး နှစ်ပတ် တရားလာထိုင်တယ်တဲ့ စနစ်တကျ ထိုင်မယ် ဆိုရင် နိဗ္ဗါန်တောင် ရောက်နိုင် တဲ့ တရားဆိုတော့ ခါးနာတာ ခေါင်းကိုက်တာ လောက်တော့ ပြောစရာတောင် လိုမယ် မထင် ပါဘူး...
နောက်ပြီး အဖြူလေး ပြောသလို တရားထိုင်လို့ လေဖြတ် တာမျိုးတော့ မကြုံဘူးသလို မကြားဖူးဘူး
နောက်ပြီး သုံးကြိမ်လောက် ကို တခါထိုင် ၁ဝရက်လောက် နဲ့လည်း ဘာမှထူးခြားနိုင်မယ် မထင်ဘူး (ပါရမီ မပါသေးတဲ့ လူတွေအတွက်ပါ မမ အပါအဝင်ပေါ့)
လက်တွေ့ မပါရင်တော့ တရားနာတာနဲ့ တော့ မရနိုင်ဘူး... လက်တွေ့ ထိုင်ရင် တရားမနာလည်း ရနိုင်တယ်လို့ မမတော့ ထင်တယ်
ဒဿန ပညာနှင့် မသိနိုင်
အဲဒီလို နာမှုကျဉ်မှု စတဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာတွေကို ..မခံသာတဲ့ သဘော၊ ဆင်းရဲတဲ့ သဘော သက်သက်မျှ ပါကလား လို့ ကိုယ့်တွေ့ဉာဏ်နဲ့ သိနေတာ က ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ အရှိသဘာဝ ကို အရှိအတိုင်း သိနေခြင်း ပါပဲ.. ငါနာတယ် ငါကျဉ်တယ် လို့ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ အနေနဲ့ မသိမမြင် ဘဲ နာမှုကျဉ်မှု သဘော နဲ့ ဒီသဘော ကို သိနေတဲ့ စိတ်ကလေးမျှ ပဲ လို့ အရှိအတိုင်း သိနေပါတယ် ဒီလို ... ငါ ... မပါတဲ့ အသိ ကို အတွေး အမြင် ဒဿနပညာ နဲ့ ဆင်ခြင်တွေးခေါ် လို့ မသိနိုင် မရနိုင် ပါဘူး။ ရုပ်နဲ့ နာမ် ကို သူ့အရှိ သဘာဝ အတိုင်း စောင့်ရှုရာ က ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကိုယ်တွေ့(ဘာဝနာ) ဉာဏ် နဲ့ မှသာ သိနိုင် ရနိုင် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရား က .. အတက္ကာဝစရော... ဆင်ခြင်တွေးခေါ်ဉာဏ် ဖြင့် မသက်ဝင်နိုင်၊ (ဝါ) ဆင်ခြင်တွေးခေါ်ဉာဏ် ၏ အရာမဟုတ် လို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
လိုင်းမကောင်းလွန်းတဲ့ကြားထဲက
အခုလို ရ အောင်ပို့ ပေးတာကျေးဇူးပါပဲဗျာ..။
အခု ရေးထားတဲ့ အထိတော့ သေချာ ဖတ်သွားတယ် ကိုဖြူရေ. . . ။
ရှေ့ဆက်ရေးမဲ့ဟာကိုတော့ ပြန်ရောက်မှပဲ သေချာ ထပ်ဖတ်ပြီး အစအဆုံး ခြုံပြောတော့မယ်ဗျာ။
နာရီဝက်တောင် အနိုင်နိုင်ရယ် တစ်ခါတစ်လေ ၁၅မိနစ်လောက်နဲ့ပဲ ရပ်လိုက်ရတာ ..မျိုး တော်တော်ဆိုးတယ်အကို...မလုပ်နိုင်သေးဘူး ကောင်းကောင်း အဲဒါတောင် ဝင်လေထွက်လေ အသိလေးကိုပဲ စုစည်းလို့ မရသေးတာ...:)
"ငါယောင်္ကျားပဲ .. သူများရရင် ငါလည်း ရ, ရမယ်ဟု
ဇောစိတ်တို့ ဖြင့်ပိုင်းဖြတ်ရင်း အချိန်စေ့ အောင် ဆက်လက် ပေထိုင်ပစ်လိုက်ပါသည်။"
ငါဆိုတဲ့ မာန်ရှိနေပါတယ် ခန္ဓာပေါ်မှာ ငါ စွဲနေမှတော့
တရားရှာလို့ မရနိုင်ပါ။ ခန္ဓာမှာ ပေါ်လာသမျှ သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်။
ပြီးတော့ တရားအားထုတ်တဲ့အခါ မှာ စိတ်တွေတင်းပြီး ထိုင်ရင် အကြောအခြင်တွေပါ တင်းတောင့်လာပါတယ် ခန္ဓာကိုယ် သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်ရင် တွေ့ရပါလိမ့်မယ် အဲ့လိုအချိန်မှာ စိတ်တွေတင်းထားတာကို လျှော့ချကြည့်လိုက်ပါ အကြောအခြင်တွေပါ လျော့ပါလိမ့်မယ်။ နာတာ ကျင်တာတွေလဲ သက်သာပါလိမ့်မယ်။
တရားအလုပ် လုပ်ပါတယ်ဆို မတရားလုပ်ခိုင်းနေမှတော့ ရုပ်နဲ့ နာမ် က ဖောက်ပြန်တော့တာပါဘဲ။
မတရားခိုင်းစေခြင်းဖြင့် တရားမရနိုင်ပါ။ ဒီစိတ်ကြီးတင်းထားတာက ဘယ်အချိန်ထိ တင်းနိုင်မှာလဲ။
မကိရေခါးနာတယ်ဆိုရင်လဲ လမ်းလျှောက်ရင်း တရားမှတ်လို့ရပါတယ် မြတ်စွာဘုရားက ဟောတာ အရိယာပုဒ် လေးမျိုးထဲက အဆင်ပြေတဲ့နည်းနဲ့ လုပ်စေပါတယ်။
ခါးနာသည် ဖြစ်စေ မနာသည်ဖြစ်စေ ဘာရောဂါမှ မရှိလဲ ခန္ဓာသဘောကိုက ဖောက်ပြန်နေပါတယ်။ အခု နာတာ ကြင်တာ ထုံတာ ကိုက်တာ ခဲတာ စတဲ့စတဲ့ ဝေဒနာမျိုးစုံကို လူကောင်းပကတိကျန်းမာနေတဲ့သူတွေလဲ တွေ့ကြုံခံစားရပါတယ်။ စိတ်တွေလဲ မတည်ငြိမ် ယောက်ယက်ခတ်နေတာကလဲ အလေ့အကျင့် မရှိရင် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်။
ဘယ်အလုပ်မဆို တဖြေးဖြေးချင်းလုပ်ယူရပါတယ်။ အခု ကိုအဖြူလေးက စစချင်း ဇွတ်ပေထိုင်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ စိတ်ရှိပေမယ့် ခန္ဓာက မလိုက်နိုင်ပါဘူး ။ တခါတလေတော့လည်း စိတ်တွေပျံ့လွင့်လွန်းပြီး နာတာကြင်တာတွေကို ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်တာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ခန္ဓာပေါ်မှာ စွဲလမ်းတဲ့တဏှာနဲ့ ယုံကြည်မှု စိတ်လွန်ဆွဲနေပါတယ် တရားထိုင်လို့ လေဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ကို စွဲလန်းတဲ့ တဏှာက အနိုင်ယူသွားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်တန်ခိုး နဲ့ယုံကြည်မှုတွေက အဲဒီ စိတ်တွေကို အနိုင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုအဖြူလေးရေ မကြောက်မရွံ့နဲ့ ဆက်လက်ပြီး ချီတက်နိုင်ပါစေ။ ကျွန်တော့အတွေ့အကြုံအရ ပြောရရင် ရောဂါမဖြစ်ေတဲ့အပြင် ရောဂါတွေ ပျောက်ပါတယ်။
စိတ်နဲ့ ရုပ်က တလှည့်စီ ဦးဆောင်သွားပါတယ် တခါတလေ စိတ်က ဦးဆောင်တတ်သလို တခါတလေလဲ ရုပ်က ဦးဆောင်ပါတယ်။ တရားလုပ်ခါစမှ စိတ်ကိုတအားထိန်းချုပ်တာ ၊ ရုပ်ပိုင်းတွေကို အရမ်းထိန်းချုပ်တာက တရားမရစေတဲ့အပြင် တရားကြောက်သွားပြီး နည်းမျိုးစုံ ဆင်ခြေပေးကာ နာတရားလေးနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တရားစာလေးဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် ကျေနပ်နေတတ်ကြပါတယ် လက်တွေ့အလုပ် မပါရင်တော့ စာသိနဲ့မျောနေအုံးမှာပါ လက်တွေ့ အလုပ်ပါမှဥာဏ်သိရမည် ဥာဏ်သိနှင့်မှသာလျှင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမည်။
ကောင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် သာဓုပါကွယ်။
ဖြစ်-ပျက် ရှုရင်း သမာထမှာ မရပ်တံ့ပဲ ဝိပဿနာ အကူး အယူမလွဲဖို့ လိုပါတယ်။
ကျွန်မ ပလမဦးဆုံး ရိပ်သာဝင်ဖြစ်တာက ရန်ကုန် ဖြူးမဟာစည်ရိပ်သာမှာပါ။ တရားထိုင်တာကတော့ ငယ်ကတည်းက အမေက အကျင့်လုပ်ပေးထားလို့ မကြာခဏ ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်ကျင့် ရှိနေတဲ့အတွက် ရိပ်သာစစဝင်ချင်းနေ့တွေဖြစ်ပေမဲ့ ထူးထူးခြားခြား ခက်ခက်ခဲခဲတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အလုပ်ပြန်ဝင်ရတော့မှာမို့ ရိပ်သာက ပြန်ခဲ့ရတာကိုတောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်းတရားထိုင်ရင် အကြာကြီးမထိုင်နိုင်တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဒါကြောင့် အမေကအမြဲပြောတာ တရားအလုပ်ကို ငယ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်သင့်တယ်။. အသက်ကြီးလာလေ ကိုယ်ခန္ဓာဖောက်ပြန်လေဆိုရင် တရားအားထုတ်ဖို့ခက်လာတယ် တဲ့..
ကိုအဖြေးလူရေ..... အချို့ကိစ္စအတွေး အခေါ် အချုိ့မှာ Agree ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
ငါယောင်္ကျားပဲ သူများရ ငါလည်း ရရမှာပေါ့ လို့တင်းလုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဒေါသတွေပါ ပါလာတာ သတိထားမိရပါတယ်ဗျာ။
အာနာပါန အလုပ်က ဝေဒနာကို မြင်အောင် ကြည့်ခြင်း၊ စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို ရစေခြင်းဆိုတာ ထက် လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ပါရမိ မကောင်းခဲ့တာ ဆိုတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ ဆို ဆရာ ကောင်းလိုပါတယ်... ။ အဲ.... ဆရာကောင်း ရှာဖို့ တော့ ကိုယ့်တာဝန်တာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်အဲ့ဒီလိုမြင်ပါတယ်။
ကျနော်ငယ်စဉ်က (သိတတ်စမှ...... ၈တန်း ကျောင်းသားဘ၀ထိ) တရားနာ တရားထိုင် တဲ့ အလုပ်က အရမ်းရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။
စကားမစပ်.။ ကျနော့်လင့်လေး ချိတ်မယ် ဆိုတာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာပါကြောင်းဗျာ။ အတွေ့ အကြုံလေးဆိုတာတော့ ကျနော် မရှင်းလင်းလှဘူး။ ကိုအဖြေးလူတွေ့ ကြုံခဲ့ရတာလား။ ကျနော် သိချင်ပါသေးတယ်ဗျာ.... အဲ.... တိုင်ဝမ်ထိ လာဖို့ တော့ မလွယ်ဘူးနော်...... သိတယ်ဟုတ်.။။။။။။။။ :))))))))))
အာနပါန ဆိုတာ စစချင်းတော့ ခက်ခဲပါတယ် . . . ဘုရားရှင်ဟောခဲ့ဖူးပါတယ် . . . မဇ္စိမပဒိပဒါ တဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်သာ အကောင်းဆုံးပါ. . . အတင်းဇွတ် ကြိတ်မှိတ် ထိုင်မယ့်အစား . . ဖြစ်ပျက် ယိုးယွင်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို သက်သောင့်သက်သာ အနေအထားလေး ပြင်ယူပြီး စိတ်ကိုထိန်းချုပ်တာက အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ် . . . .း)
အခု ထိုင်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဖြစ်မှုတွေ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ အနေအထား သဘောတရားလေးကိုဘဲ စောင့်ကြည့်ပေးပါ နာတာ ကိုက်တာ ခဲတာ စတဲ့ နာကျင်မှု မျိုးစုံ တခါတလေ တရားထိုင်လို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ခံစားမှုတွေလဲ ခံစားရအုံးမှာပါ ကောင်းတာဘဲဖြစ်ဖြစ် မကောင်းတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားလေး လိုက်ပြီးကြည့်ပေးနေပါ နာလို့ ပျောက်ချင်တဲ့ လောဘ မပျောက်ရကောင်းလား ဆိုတဲ့ ဒေါသ အဲဒီ အစွန်းနှစ်ဘက် ကလွတ်နေရပါ့မယ် ပြောတော့သာ လွယ်တာ သေသေချာချာ ကျင့်ကြည့်ပါ လုပ်ရတာ အတော် ခက်ပါတယ် ငါယောက်ကျားဘဲ ဘာဖြစ်လို့ မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ ဆိုတဲ့ မာန တရားအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ မာန်ချပြီးမှ လုပ်ရပါတယ် အရာရာ သည်းခံရပါတယ် ကိုယ့်ခန္ဓာပေါ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ် ပိုင်း ရုပ်ပိုင်း ဘာတွေ ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်နေတာကို စောင့်ကြည့်ရင် ဖြစ်မှု ပျက်မှုတွေ သေသေချာချာ မလွဲမသွေ တွေ့နိုင်ပါတယ် တရားနာခြင်း စာဖတ်လို့သိခြင်း တွေကတော့ စာသိဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် စာသိနဲ့တော့ နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူး ကိုအဖြူလေးရေ မကျင့်မှာစိုးလို့ နောက်တခါ ကွန့်မန့်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်
လောက သဘာဝတရားကြီးကိုက အဖြစ်ရှိရင် အပျက်ရှိပါတယ် ။
မျက်ရည်များဖြင့် ပြုံးစေသူ ( ၂ )
မျက်ရည်များဖြင့် ပြုံးစေသူ ..။
ကျွန်တော့် အတွက် ဒုတိယစိန်ခေါ်ပွဲ ( သို့)
လန်းဖိုင်စာသိုက်နှင့်သံသယာအဆက်ဆက်...။
စနေသမီး “ စူဒါနမ် ”